Zimbalwa abantu abangazange wake iphutha ikhanda. State lapho kubuhlungu umuntu ayikuvumeli ukuba ukugxila emsebenzini, lutho ukuba yiyo, futhi akanandaba. Kunabantu abavame ukuphathwa ikhanda yansukuzonke, izimbangela zazo zingase zihluke kakhulu emvelweni. yokuphila kwethu okusheshayo, njalo sindisa sezinzwa futhi ngokomzimba, ukucindezeleka, operation udadewenu, simatasa emsebenzini isimiso kanye nokuntuleka evamile phambili ukuphumula okuhle ikhanda njalo.
Abantu abaningi abasebenza emahhovisi, ngokuvamile kufanele zekhanda ezinamandla. Izizathu ezifana umsebenzi ngokugcwele kukhompyutha, ukungabi umoya ohlanzekile, khona ukucindezeleka sezinzwa futhi sindisa ngokomzimba bandisa oluxhumekeke nokucupha sifo. Abanye abaqashi, ukwazi izimo zangempela zokusebenza abasebenzi bayo, e izikhangiso umsebenzi ngisho kubonise oseceleni kuleli Abafakizicelo Iyafaneleka: ukucindezeleka ukubekezelelana. Lona ilungelo kusho ukuthi umsebenzi lihlobene overloads abakaze, futhi akubona bonke abantu abanomqondo amandla okubhekana nayo ngokuphumelelayo ngaphandle nemiphumela empilweni yazo.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu usebenza ngokuphelele ngaphansi kwezimo ezivamile, ekhaya impahla ezolile futhi okuphumuzayo, kodwa isazoqhubeka baphathwa ikhanda. Izizathu lapha kungase kube yinto ehlukile. Ngokwesibonelo - ufuzo ezimbi. Ososayensi baye bafakazela ukuthi uma bengane uhlushwa migraines, ezimweni eziningi ezizophasiswa kuye libe yifa lenu. Ekushintshashintsheni umfutho womoya, kanye izinguquko izimo zezulu kungaba kuvuse wezakhiwo.
ukuhlaselwa Migraine zivame yashubisa ekupheleni kwesonto ukusebenza, ngenxa sindisa kunalokho eqinile sezinzwa futhi ngokomzimba. Uma sinezela lokhu bikho ukuphumula ngokwanele ngempelasonto, lapho udinga ukwenza izinto eziningi endlini, imbangela bekhanda chronic ukukhathala kucacile. Abanikazi izimoto kungaba futhi ngiphathwe ikhanda elingapheli njalo. Izizathu ezisobala: njalo nezimo ezicindezelayo endleleni.
Singeke singazinaki ukulimala ekhanda. Uma ephelezelwa ukuxukuzeka, umuntu angase afise ukuhlupha wezakhiwo. Izizathu ingase futhi amanga iziyaluyalu sezinzwa ezinjengokucindezeleka futhi neurasthenia. Imiphumela umkhuhlane noma umphimbo obuhlungu kungase kubangele ubuhlungu bekhanda, kanye nanoma yikuphi ukugula kuhambisana imfiva. iphunga eqinile okunoshukela kungaba avuse ikhanda eside, ngaphezu kwalokho, ngempela ngaphandle ukuthi kumnandi noma cha.
Endaweni ehlukile, kumelwe kushiwo mayelana nezingane, okuvame zingadida ngenxa yekhanda. Izizathu lapha ingase ibe khona ehlukile ngokuphelele. Ngokwesibonelo, emaphaketheni izifo ezingamahlalakhona - sinusitis, sinusitis frontal, namathansela. Ngakho izingane uzizwe ukukhathala, ubuthakathaka. Ubuhlungu ukucasulwa khona overvoltage noma ukuvuvukala izinqubo emzimbeni noma engqondweni emzimbeni. Izizathu kwezinye izimo futhi kungase ukukhonza ukudla. Ngokwesibonelo, ama-nitrate nama, eziqukethwe ayi noma isoseji kungabangela ubuhlungu bekhanda gqwa ngenxa constriction semithambo. Izithako zokudla ku umkhiqizo (aspartame, sodium nitrite) futhi kungaholela emiphumeleni enjalo.
Ngo izinsana ikhanda angase avuse ukukhanya okukhulu, khona imisindo elikhulu, ukungabi emoyeni opholile. Asikabi khona imbangela ikhanda, esakhiwa ngo ukuthuthukiswa nomfutho wegazi ophezulu. Isizathu kungaba unenkinga, ufuzo, isimo sezulu izici nokunye. Ngokuvamile izingane awe, nezingange zonke ukuwa Ungaqeda ngokujabula. Kuyadingeka ukuba banake ukuziphatha kwengane ngemva kwengozi. Uma kid kuyinto naughty futhi ekhononda ka ikhanda, kubalulekile ukuba uthintane isazi sezifo zezingane zawo futhi uhlole nokuthi ingane.
Indlela yokusula umlando "ku-Skype" ngaphandle mzamo owengeziwe?
"-MAX" (inkampani yomshuwalense): ukubuyekezwa. Zao "MAKS" - inkampani yomshuwalense